Ngaba uAbraham Lincoln wayengumzingeli weVampire?
Abraham Lincoln: UVampire Hunter kunye nezinye izinto ongazi
I-Fotosearch / Umgca / I-Archives Izithombe / Getty Izithombe
Ngaba uAbraham Lincoln ngokwenene ungumzingeli wevampire?
Mhlawumbi akunjalo. Okanye ubuncinane, ukuba kukho, akukho irekhodi yangempela yalo.
Kodwa kukho ubuninzi bezinto eziqhelekileyo malunga nomongameli we-16 wase-United States ukuba mhlawumbi wayengazi - njengokuba wayengumongameli wokuqala wokudlala imilevu.
Wayefana ne-ZZ Top of presidents ... ngaphandle kokuba ekhunjulwa ngenxa yeendvuba, wayengenaso inwele ebusweni ngobuninzi bomi bakhe.
Abaongameli beeardard basenokuba ngabomvu - kwakukho abanye abane kuphela: uGarfield, Grant, uHarrison kunye noHayes, nangona ininzi yayineemisitye kwaye ngubani ongakulibala i-Cheton A. Arthur?
UAbraham Lincoln: Ngaba uMama wakhe wabulala ngeVampires?
Uthembekile Abe. I-Getty Images (i-Archive)
"U-Abraham Lincoln: UVampire Hunter" umongameli we-16 uphinde aphinde abuyisele emva kokufakazela ukuba unina ubulawe ngabaxhasi begazi.
Enyanisweni, uLincoln wafaka ubungqina bokufa komama wakhe - kodwa akuzange kube yimimpi eyambulala.
Kwakuyinto ebizwa ngokuthi ukugula kwesibisi.
UNancy Hanks uLincoln wafa no-Abraham Lincoln wayeneminyaka engama-9 emva kokufumana eso sifo, esivela ekuphuzeni ubisi lweenkomo ezitya i-white snakeroot.
"Abahlali abaqhelekileyo kunye noogqirha babo bafumanisekanga, bengenakugula kwaye babulawa kakhulu," uDkt. Walter J. Daly, ovela kwi-University of Indiana University School of Medicine, wabhala e-Indiana Magazine yeMbali. Ukugula kwamanxuwa kwabulala abaninzi, besaba ngakumbi kwaye kwabangelwa iintlekele zengingqi zengingqi. Imimandla neefama zashiywa, imfuyo yafa, zonke iintsapho zabulawa. .. Ukunyamalala kwalo kuya kuba ngumphumo wenkqubela yeMpuma-ntshona kunye nenkqubela phambili kwezolimo. "
Ukugula komlingo kwakubizwa nangokuthi i-puking fever, isisu esisisigulane, esicothayo, kwaye sithuthumele, ngokutsho kweNational Park Service. Iimpawu ziquka ukulahleka kwesidlo, ukungabi nalutho, ukungabikho kobuthathaka, iintlungu ezingenangqiqo, ukuqina komzimba, ukuhlanza, ukunyamezela esiswini, ukunyanzeliswa okukhulu, ukuphefumula kakubi, kwaye ekugqibeleni, i-coma, i-agency ithi. Ilandelwa ukufa kwiimeko ezininzi, kubandakanywa nale.
Inyaniso iyaxelelwa, oko kuzwakala kunzima kakhulu kunabampires.
Uyise kaLincoln washada kwakhona waza u-Honest Abe wakhuliswa ngumama wakhe.
UAbraham Lincoln: Ude kakhulu kunomyinge weVampire
Abe Lincoln. I-Getty Images (i-Archive)
Ininzi abantu bayazi ukuba uAbraham Lincoln wayeyinyani kakhulu. Kodwa abaqondi ukuba lide kangakanani. Ngowama-6'4 ", wayengumongameli ode kunabo bonke (ukuba imfutshane nje ye-NBA). Ukuphakama kwakhe kwakusithi nokuba wayehlala phantsi, wayemude njengomntu oqhelekileyo-okanye i-vampire-emele .
UMongameli we-Psychic: Ngaba u-Abraham Lincoln ubonelela ukufa kwakhe?
Abraham Lincoln. I-Getty Images (i-Archive)
Kwiveki nje ngaphambi kokuba adutshulwe aze abulawe nguJohn Wilkes Booth, uAbraham Lincoln wayenalo iphupha apho ahamba khona ngeNdlu eNtshonalanga wafumana wonke umntu ekhala.
Xa ekugqibeleni wabuza umntu ukuba kutheni bonke bekhala, waxelelwa ukuba kungenxa yokuba umongameli wayebulewe.
Ngaba uAbraham Lincoln Uxhoba Lokuthuka?
Siyazi ukuba uAbraham Lincoln unokusingatha iminyango embalwa ... kodwa isiqalekiso enye ibali.
ULincoln wayengowesibini kwinqanaba elide labaongameli abakhethwe ngonyaka ophelile ngelokufa eofisini, eqala ngoWilliam Henry Harrison ngo-1840 waza waphela noJohn F. Kennedy ngo-1960.
Ngokuqhelekileyo kuthiwa " iTecumseh's Curse " ngenxa yokuba uHarrison unqobile iTecumseh kwiMpi yaseTippecanoe ngo-1811.
UAbraham Lincoln kunye noBudard Grudge
UAbraham Lincoln usenokuba udumile ngeebhedi zakhe (okokuqala ngumbongameli), kodwa kukho enye intshe eyaziwayo eyancedayo ukukhula: iilevu eziyi-12'6 ikhulile nguValentine Tapley.
I-Tapley yayingumDemokhrasi, kwaye yamthiya iRiphablikhi uLincoln kangangokuthi wafunga ukuba akayi kuphinda aphuce kwakhona xa uLincoln wakhethwa.
Yayisisithembiso ayenayo waze wafa ngo-1910.
Imfazwe Yehlabathi Yeziganeko Ezi-III kunye neNostradamus
Isikhokelo esigqibeleleyo sokusebenzisa iBhodi ye-Ouija ngokufanelekileyo
Ibhodi ye-Ouija: Ngaba yinto embi ngempela?
Ukunyuka kwe-Astral: I-Doorway ukuya kwiNew Dimension
I-Real-Wizard Life emva kwe "Harry Potter"
Ukuzisa iC4 Corvette (1984-1996)
Ukuxhasa iNgcaciso kwiComposition and Speech
Inkcazo echaziweyo kunye nemizekelo
Ukuphakama nokuwa kweNkosana yaseNazi uFranz Stangl
Kutheni iZikolo eziFanayo ziFundiswa kangaka?
I-Novena eya kwi-Saint Jude kunye nentliziyo engcwele kaYesu
Inkcazo kunye nenjongo ye-Plus / Minus Statistic kwiHockey
Izizathu zoqoqosho zokuwa kweRoma
I-Five Five Funniest iya kuFilill
Amazwi aqhelekileyo adidekile amaFir and Fur
Ukudityaniswa kwehlabathi, ukungasebenzi kunye nokuHlola. Yintoni Isixhumanisi?
Amapolisa aseNtshonalanga aseMelika aseMantla aseMelika
Indlela Yokudweba Inja Evela Kwimifanekiso
Ukusebenzisa iLwimi yeSpeyin 'Volver'
Izindlela Zokuthetha Emva koko ngeSpanish
I-Basics ye-Bodybuilding Symmetry, Icandelo II
I-SAT Amanqaku okuthelekiswa kwamkelwa kwiiKholeji zaseFlorida
ULucian Freud uPaint Elizabeth II
Abasebenzisi abayi-15 abaNgcono kwiMbali yeVini